GB/T17467-1998 နှင့် IEC1330 စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ pre-installed ဓာတ်အားခွဲရုံ၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အဆင်ပြေသောတပ်ဆင်မှု၊ နိမ့်ကျခြင်း၊ အသံနိမ့်ခြင်း၊ short circuit နှင့် overload ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း။
၎င်းသည်စီးပွားရေးအချက်အချာများ၊ လူနေအိမ်ခရိုင်များ၊ စက်မှုနှင့်သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဆေးရုံများ၊ ကျောင်းများ၊ လေဆိပ်များ၊ ဘူတာရုံများ၊ ဆိပ်ကမ်းများ၊ မြေအောက်ရထားများနှင့်အခြားနေရာများအတွက်သင့်တော်သည်။ YBM နှင့် YBP တို့သည်အပြင်အဆင်နှစ်မျိုးရှိသည်။
ဓာတ်အားခွဲရုံတည်ဆောက်ပုံသည် "မျက်လုံး" သို့မဟုတ် "ထုတ်ကုန်" အပြင်အဆင်ဖြစ်သည်
ထုတ်ကုန်၏အခွံသည်အလူမီနီယံအလွိုင်းပန်းကန်၊ သံမဏိပန်းကန်၊ ပေါင်းစပ်ပန်းကန်၊ ဖန်သားဖိုင်ဘာအားဖြည့်ဘိလပ်မြေပန်းကန်စသည်တို့ဖြစ်သည်။
သေတ္တာ၏အပေါ်ဆုံးအဖုံးသည်ကောင်းမွန်သောအပူလျှပ်ကာ၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကာကွယ်မှုနှင့်လေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းသည့်နှစ်ထပ်အလွှာတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ထားသည်။
ဓာတ်အားခွဲရုံတစ်ခန်းစီကိုသံပန်းကန်ပြားဖြင့်ပိုင်းခြားထားပြီးအခန်းတစ်ခန်းစီတွင်အလင်းရောင်အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများတပ်ဆင်ထားသည်။ Transformer ၏အပေါ်ဆုံး G တွင်ချိန်ညှိရန်အလိုအလျောက်အိတ်ဇောတပ်ဆင်ထားသည်
GB/T17467-1998 စံနှင့် IEC1330 စံနှုန်း၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တပ်ဆင်မှု၊ အနိမ့်ဆုံးရှုံးမှု၊ အသံနိမ့်ခြင်း၊ တိုတောင်းသောကြိုးနှင့်အားပိုအားခံနိုင်ရည်ရှိမှုတို့နှင့်အညီဖြည့်သွင်းထားသောဓာတ်အားခွဲရုံ စီးပွားရေးအချက်အချာများ၊ လူနေအိမ်ရာများ၊ စက်မှုနှင့်သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဆေးရုံများ၊ ကျောင်းများ၊ လေဆိပ်များ၊ ဘူတာရုံများ၊ ဆိပ်ကမ်းများ၊ မြေအောက်ရထားများနှင့်အခြားနေရာများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ စာလုံးပုံစံ (YBM) နှင့်စာလုံးအမျိုးအစား (YBP)
·အမြင့်: ပေါင် ၁၀၀၀ မီတာ
·လေတိုက်နှုန်း≤ 34m/S (700pa ထက်မပို)
·ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်: အမြင့်ဆုံးအပူချိန် +၄၀ ℃၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန် -35 ℃
·ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ: နေ့စဉ်ပျမ်းမျှသည် ၉၅%ထက်မပိုပါ၊ လစဉ်ပျမ်းမျှသည် ၉၅%ထက်မပိုပါ။
· Shockproof: အလျားလိုက်အရှိန်သည် ၀.၄ မီတာ/s2 ထက်မပိုပါ၊ ဒေါင်လိုက်အရှိန်သည် ၀.၁၅ မီလီမီတာ/s2 ထက်မပိုပါ။
·တပ်ဆင်မှု site inclination: ၃ ဒီဂရီထက်မပိုရ။
·တပ်ဆင်မှုပတ်ဝန်းကျင် - မီး၊ ပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်၊ ပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းမှု၊ ဓာတုချေးများနှင့်ပြင်းထန်သောတုန်ခါမှုမရှိသောနေရာတွင်တပ်ဆင်ထားသည်။
A. ဓာတ်အားခွဲရုံတည်ဆောက်ပုံကို "mesh" (သို့) "product" ၏ပုံသဏ္န်အတိုင်းစီစဉ်ပေးထားပါသည်။
B. ထုတ်ကုန်ခွံပစ္စည်းကိုအလူမီနီယံအလွိုင်းပန်းကန်၊ သံမဏိပန်းကန်၊ ပေါင်းစပ်ပြား၊ ဖန်ဖိုင်ဘာအားဖြည့်ဘိလပ်မြေဘုတ်နှင့်တူသည်။
C. ဓာတ်အားခွဲရုံ၏အခြေခံကိုခိုင်ခံ့သောခံနိုင်ရည်နှင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံလောက်သောခိုင်ခံ့မှုရှိသောသွပ်ရည်စိမ်သံမဏိ (သို့) ဘိလပ်မြေတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
D. အစိုးရအဖွဲ့၏အပေါ်ဆုံးအဖုံးသည်ကောင်းမွန်သောအပူလျှပ်ကာ၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်နှင့်လေ ၀ င်လေထွက်သက်ရောက်မှုရှိသောနှစ်ထပ်အလွှာကိုလက်ခံသည်။
E. ဓာတ်အားခွဲရုံ၏အခန်းတိုင်းကိုလေဖြတ်ခြင်းဖြင့်လွတ်လပ်သောအခန်းမှခွဲထားသည်။ အခန်းတိုင်းတွင်အလင်းရောင်အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများတပ်ဆင်ထားသည်။ Transformer ၏အပေါ်ဆုံးတွင် Transformer အခန်း၏အပူချိန်ကိုထိန်းညှိရန်အလိုအလျောက်လေအိတ်ဇောတပ်ဆင်ထားသည်။
အက်ဖ်သေတ္တာသည်အရောင်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီးပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ညှိနှိုင်းနိုင်သည်။
နာမည် ကုမ္ပဏီ ဖိအားမြင့်ဘက် Transformer များ Low pressure side LV ဖြစ်သည်
အဆင့်သတ်မှတ်သည် Hz 50
စွမ်းရည်သတ်မှတ်သည် KVA 10 ၃၀-၂၅၀၀ ၀.၄
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား ကေဗွီ ၄၀၀ \_ ၆၃၀ ၅၀-၂၅၀၀
လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည် KA 12.2 (2s or 4s） 16 （2s or 4s） 20 （2s or 4s 15 (1s), 30 (1s), 50 (1s), 65 (1s)
icw KA ၄၂/၄၈
ပါဝါကြိမ်နှုန်း Tolerance လက်ရှိ ကေဗွီ ၇၅/၈၅
Lightning Impulse Voltage Resistance ဖြစ်သည် ကေဗွီ 75
အပိုင်းအခြားကိုတို့ပါ ကေဗွီ Ip33 *2*2.5% Ip33
ကာကွယ်မှုအဆင့် KA အိုင်ပီ ၂၃
ဆူညံသံအဆင့် dB < 50
မှတ်ချက်၊ prodcut အတိုင်းအတာနှင့်အလေးချိန်သည်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွက်အချက်အလက်များဖြစ်ပြီးဒီဇိုင်းတိုးတက်မှုများကြောင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ယခင်:
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းအနိမ့်ဗို့အား Switchgear GCS Low Voltage Drainage Switchgear Supplier-shengte MOQ 1pcs နောက်တစ်ခု:
စက်ရုံစျေးနှုန်းနှင့်အတူ OEM ပေါင်းစပ် Transformer လျှပ်စစ်သေတ္တာအမျိုးအစား Transformer
မင်းရဲ့ message ကိုဒီမှာရေးပြီးငါတို့ဆီပို့ပါကုန်ပစ္စည်း
အမျိုးအစားများကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ (သို့) ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏အီးမေးလ်ကိုချန်ထားခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ၂၄ နာရီအတွင်းဆက်သွယ်ပေးပါမည်။